फोटोग्राफी व्यवसाय कार्डहरूको लागि रचनात्मक विचारहरू - Print Peppermint
घर / डिजाइन ब्लग / असंगठित / फोटोग्राफी व्यवसाय कार्डहरूको लागि रचनात्मक विचारहरू
एक रूप फोटोग्राफर, तपाईं आफ्नो रचनात्मकता प्रयोग र फोटोग्राफी सबै भन्दा राम्रो कब्जा गर्न को लागी कौशल फोटो। तेसैले, तपाइँका ग्राहकहरु तपाइँ, राम्रो, रचनात्मक हुन को लागी आशा गर्नुहुन्छ। तेसैले, उनीहरुको निराशा कल्पना गर्नुहोस् यदि उनीहरु तपाइँको सुस्त र सांसारिक देख्छन् व्यापार कार्डहरू। तपाइँ एक कठिन समय उनीहरुलाई विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ कि तपाइँ साँच्चै एक रचनात्मक र प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ फोटोग्राफर.
धन्यबाद, तपाईं यसलाई केही रचनात्मकको साथ परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ फोटोग्राफी व्यवसाय कार्ड। यदि तपाईं अडिग हुनुहुन्छ भने विचार, चिन्ता नगर्नुहोस्, किनकि यी रचनात्मक रसहरू बग्नका लागि केहि यहाँ छन्:
म्याट फिनिशको साथ व्यवसाय कार्डहरू
यो अब तपाइँको डिजाइन गर्न सम्भव छ व्यापार कार्डहरू अनलाइन, र त्यसपछि सेवा प्रदायक यो पेशेवर एक सस्ती मूल्य को लागी मुद्रित हुनेछ। तपाइँ कार्डहरु संग एक स्टाइलिश ठोस रंग मैट छ जान सक्नुहुन्छ समाप्त गर्नुहोस्। यो सुरुचिपूर्ण र औपचारिक देखिन्छ। धेरै पटक, अनलाइन साइटहरु पनि टेम्पलेट्स छ कि तपाइँ तपाइँको आवश्यकताहरु लाई अनुकूल गर्न अनुकूलित गर्न सक्नुहुन्छ।
पारदर्शी फोटोग्राफी व्यापार कार्ड
यदि तपाईं एक अनौंठो व्यापार कार्ड पाउनको लागि मर्दै हुनुहुन्छ जुन भीडमा उभिन्छ, एक अर्धपार्शनको लागि जानुहोस् प्लास्टिक व्यापार कार्ड। कार्ड मात्र आँखा चिम्ल्ने मात्र होइन, तर तपाईं सम्भावित ग्राहकहरूलाई विश्वस्त गर्न सक्षम हुनुहुन्छ कि तपाईं एक बहुमुखी र रचनात्मक हुनुहुन्छ। फोटोग्राफर.
न्यूनतम ठोस रंग व्यवसाय कार्डहरू
जताततै मिनिमलिज्म सबैभन्दा नयाँ प्रवृत्ति हो, त्यसोभए किन व्यवसाय कार्डहरूले पनि यो प्रवृत्तिलाई पछ्याउनु हुँदैन? ठोस र in्गहरू भित्र छन्, तर निश्चित गर्नुहोस् कि डिजाइन न्यूनतम छ र फन्टहरू सानो छन् तर सुगम छन्। यसले व्यापार कार्डलाई सफा नजर दिनेछ र तपाईंको छनौटको रंगमा निर्भर गर्दछ, तपाईं कार्ड आकर्षक देखाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँसँग तपाइँको व्यवसायको लागी लोगो छ भने, तपाइँको ब्रान्डको साथ सिnch्ख्रोनाइज गर्न त्यहाँबाट र color्ग लिनुहोस्। वैकल्पिक रूपमा, तपाइँ एक विरोधाभास र color्गमा जान सक्नुहुन्छ जुन लोगोलाई छुट्ट्याउँछ।
क्यामेरा आकारको व्यवसाय कार्ड
ठीक छ, तपाईं एक हो फोटोग्राफर, त्यसैले यो बिल्कुल ठीक छ अनुकूलित व्यापार कार्ड छ। यदि तपाइँ बच्चाहरु को फोटो मा क्लिक गर्न को लागी हो, यो तपाइँको विजयी व्यापार कार्ड डिजाइन हुन सक्छ। यस्तो फोटोग्राफी व्यवसाय कार्ड आकर्षक छन् र बच्चाहरु लाई लिन तिनीहरूलाई लोभ्याउन। सबै कोठामा उनीहरूको पीछा नगरी तिनीहरूको फोटोहरूमा क्लिक गर्न यसले तपाईंलाई सक्षम गर्दछ! साथै, अद्वितीय आकार कार्डको नेत्रगोललाई आकर्षित गर्नेछ पहिले जस्तो कहिल्यै होइन।
फोटो व्यवसाय कार्डहरू
यदि तपाइँ फोटोग्राफी को एक विशेष प्रकार मा विशेषज्ञता, तपाइँको व्यवसाय को प्रदर्शन को लागी एक तरीका को रूप मा तपाइँको व्यापार कार्ड को उपयोग गर्नुहोस्। तपाइँको पोर्टफोलियो बाट एक छवि लिनुहोस् र कार्ड मा राख्नुहोस्। तपाइँको नाम शीर्ष मा छापिएको र प्राप्त गर्नुहोस् सम्पर्क तल मा विवरण ताकि छवि दुई को बीच sandwiched छ। तपाइँ सम्भावित ग्राहकहरु लाई तपाइँको पोर्टफोलियो देखाई राख्न को लागी छैन; व्यापार कार्ड मा छवि पर्याप्त हुनेछ।
मिनी फोटोग्राफी व्यवसाय कार्ड
स्ट्याकको शीर्षमा यसलाई बनाउनको लागि अर्को रचनात्मक तरिका जुन तपाईं पहिलो फोटोग्राफर हुनुहुन्छ जो बोलाइन्छ परिवर्तन गरेर हो आकार व्यापार कार्ड को। तपाईंको व्यवसाय कार्डलाई भन्दा सानो बनाउनुहोस् मानक आकार ताकि यो मूल रूपमा वालेटमा फिट हुन्छ। यसले व्यक्ति कार्ड कायम राख्न र तपाईंलाई कल गर्ने बेलामा उनीहरूलाई पेशेवर फोटोग्राफरको आवश्यक पर्दा मानिसहरूका सम्भावहरूलाई बढावा दिनेछ।
प्लास्टिक क्यामेरा व्यवसाय कार्डहरू
यदि तपाईं यसलाई एक नौसिखिए फोटोग्राफरको रूपमा ठूलो बनाउन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले सम्भाव्यतालाई प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ जुन तपाईंको व्यवसाय हो। यो गर्नु भन्दा राम्रो तरीकाले हात दिएर भन्दा राम्रो छैन प्लास्टिक क्यामेरा व्यवसाय कार्डहरू। तपाईंको क्यामेरा तपाईंको कार्डमा प्रदर्शन गर्नुहोस् ता कि सम्भावित ग्राहकहरूले महसुस गरे कि तपाईं प्रो हुनुहुन्छ र स्मार्टफोनको प्रयोग गरेर नयाँ केहि होइन। यो भरखरै चिसो र चल्तीको रूपमा आउँदछ र यसले मानिसहरूलाई बस्न र तपाईंको कार्डमा एक दोस्रो नजर राख्दछ। यहाँ तपाईको क्यामेराको फोटो हाई-रिजमा कार्डमा छापिएको छ ता कि यो बाहिर छ।
कालो र सुनौत विशेष व्यवसाय कार्डहरू
In मामला तपाईंको लक्षित ग्राहकहरू उच्च प्रोफाइल ग्राहकहरू हुन्, तपाईं एक व्यवसाय कार्ड चाहानुहुन्छ कि स्टाइलिश र शानदार। कुनै चीज oozes शैली र oomph भन्दा राम्रो छैन कालो र सुन। त्यसोभए, किन यी रंगहरू तपाइँको व्यवसाय कार्डमा प्रयोग गर्नुहुन्न र तपाईंले पासोमा पार्न खोज्नु भएको विशेष ग्राहकलाई किन प्रभाव पार्दैन?
लेन्स शटर व्यापार कार्डहरू
यो अनौंठो र रचनात्मक व्यापार कार्डले नेत्रगोललाई आकर्षित गर्दछ र सम्भावित ग्राहकहरूको लागि आकर्षण बन्छ। केवल एक हेराइले सम्भावित ग्राहकहरूलाई तपाइँले प्रदान गरेको सेवा थाहा पाउनेछ र लेन्स शटर डिजाईनले बिनमा टास नगरी कार्ड राख्नेछ। छायाँ र छाया भएका फन्टहरूको साथ लेन्स शटर डिजाइन क्लब गर्नुहोस् र तपाईंको हातमा एक विजेता हुनेछ।
पर्यावरण अनुकूल व्यवसाय कार्ड
In मामला तपाइँको लक्षित दर्शकहरु वातावरण को बारे मा चिन्तित छन्, तपाइँ यसको लागी तपाइँको हेरचाह प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ फोटोग्राफी ब्यापार कार्ड पुनर्नवीनीकरण बाट बनाएर। कागज। तपाईं निश्चित हुन सक्नुहुन्छ कि यो सबै सही कारणहरूको लागि ध्यान आकर्षण गर्दछ र तपाईंलाई एक बयान गर्न अनुमति दिनेछ। आज, पर्यावरण-मैत्री नवीनतम मन्त्र बनिएको छ र यदि तपाई साँच्चिकै वातावरणको ख्याल गर्नुहुन्छ र तपाइँको प्रतिस्पर्धा पछाडि छोड्ने चाहानुहुन्छ भने तपाईले यसलाई आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
पारदर्शी व्यापार कार्डहरू
जब तपाईं रचनात्मक खोजी गर्दै हुनुहुन्छ विचार फोटोग्राफरहरु को व्यापार कार्ड को लागी, तपाइँ एक खारेज गर्न सक्नुहुन्न पारदर्शी व्यापार कार्ड। तपाइँ यसलाई छाप्न सक्नुहुन्छ स्पष्ट प्लास्टिक र सुनिश्चित गर्नुहोस् कि कार्ड मा मात्र रंग तपाइँको लोगो हो। अरु सबै कुरा भित्र हुनेछ कालो कार्ड को लागी फन्ट बाहिर खडा र ध्यान पाउन को लागी यो योग्य छ।
फोटो कोलाज व्यापार कार्डहरू
तपाइँको सबै भन्दा राम्रो काम को कोलाज बनाउनुहोस् र कार्ड को अगाडि उनीहरुलाई प्रिन्ट गर्नुहोस्। धेरै सम्भावित जानकारी संग तपाइँको सम्भावित ग्राहकहरु लाई डराउन कोसिस नगर्नुहोस्। यसको सट्टामा, दृश्य अपील मा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् ताकि तपाइँको ब्यापार कार्ड ले उनीहरुको ध्यान आकर्षित गर्दछ। तपाइँको लागी कार्ड को उल्टो राख्नुहोस् सम्पर्क विवरण। सरल अझै सम्म आश्चर्यजनक - मात्र के तपाइँ खोजिरहनु भएको थियो।
त्यहाँ तपाईंसँग यो छ - सम्पूर्ण रचनात्मक विचार लागि फोटोग्राफी व्यवसाय कार्ड। अब, यो तपाईं कत्तिको रचनात्मक प्रयोग गर्नुहुन्छ यीमा निर्भर गर्दछ विचार। तपाइँ पनि मिश्रण गर्न सक्नुहुन्छ र यी अवधारणाहरु संग मेल खानुहुन्छ केहि अद्वितीय संग आउन को लागी। एक फोटोग्राफर को रूप मा, तपाइँ फरक को रूप मा भर मा आउन को लागी सक्षम हुनु पर्छ र त्यो वास्तव मा के यी रचनात्मक हो विचार मदत तपाईं गर्न र हुन। तिम्रो के बिचार छ?
Tors रियाल्टर्स, एजेन्ट, र दलालका लागि क्रिएटिभ व्यापार कार्ड विचारहरू
कलाकारहरूको व्यवसाय कार्डहरूका लागि रचनात्मक विचारहरू →